Okuthile Kunuka Izilinganiso Nezibuyekezo ze-plugin ye-WordPress | Martech Zone
Ukunikela ekunyakazeni komthombo ovulekile kungamangalisa, kepha kuleli sonto bekungeyona enye yalezo zikhathi. Kade sinikela emphakathini we-WordPress iminyaka eyishumi manje. Sakhe ama-plugins amaningi. Abanye sebethathe umhlalaphansi, kanti abanye banokuvezwa okumangalisayo. Okwethu Iwijethi Yesithombe se-Rotator i-plugin, ngokwesibonelo, ilandwe ngaphezu kwezikhathi eziyi-120,000 futhi isebenza kumasayithi angaphezu kwe-10,000 WordPress.
I-plugin eyodwa esitshale kuyo amakhulu wamahora ku I-CircuPress, i-plugin yezindaba ye-imeyili esiyenzele i-WordPress. I-plugin inobuhlakani obuhle, ivumela ama-ejensi ukuthi akhe i-imeyili njengoba nje ebeyokwenza nekhasi lengqikimba… kepha athumele i-imeyili ngensizakalo yethu ukuze sikwazi ukuphatha ukulandelela kokuchofoza, ukuphathwa kwe-bounce, ababhalisile, nokubhaliselwe. Kuthathwe umsebenzi omningi wengqalasizinda ukwenza lokhu kuqhubeke, kepha sikuwo okwesikhathi eside. Sikholelwa ukuthi abasebenzisi be-WordPress kufanele babe nesikhulumi se-imeyili sendabuko okulula ukusisebenzisa.
Ngenkathi sinyusa ipulatifomu, asikhokhisanga noyedwa umuntu wokuyisebenzisa - kuhle uma ungibuza. Ukubhalisa kunikeza inguqulo yamahhala uma uthumela ama-imeyili angaphansi kwayi-100 ngenyanga, kodwa sikunwebile lokho ngenkathi siguqula uhlelo lokukhokha lube WooCommerce futhi usebenze ekusethweni kwepulatifomu ukwenza kube lula kubasebenzisi.
Kwangimangaza ukuthi saba nokuvela kokubuyekezwa kwezinkanyezi ezi-1 kusayithi le-Plugin. Ngavele ngazabalaza ukuze ngibone ukuthi yini eyayingalungile:
Ngakho… lo msebenzisi akakaze asayine kodwa wathi lokho bekuyinsolo kwinqubo yethu yokubhalisa. Ngimangele kusukela thina ungaceli imininingwane yekhadi lesikweletu. Ubengakuthola lokho ukuthi ngabe ubephothulile inqubo yokubhalisa, kepha akazange akwenze.
Ngicabange ukuthi lokhu akulungile ngokwanele ukuletha ukunakwa ku- Automattic, Ukubhala umuntu wabo we-Plugin Support:
Impendulo engiyitholile ibishaqisa kakhulu kunokubuyekezwa uqobo. Ngaya emuva naphambili nomuntu e-Automattic ethi isayithi lethu libonakala shady ngoba ayikho intengo ebhalwe ohlwini esidlangalaleni. Unomthunzi?
Ngimkhumbuze ukuthi thina UNGACELI IKHADI LEZIKWELETU imininingwane ngaphambi kokwethula intengo kumuntu. Futhi noma kunjalo ASIKHO NGOKUQINISEKILE ukukhokhisa abamukeli bethu bokuqala. Ngabe wake wabhalisela insizakalo engabizi lutho? Nginesiqiniseko sokuthi une… WordPress icela ukubhaliswa ngaphandle kwemininingwane yamanani ezinsizeni ezingeziwe. Unomthunzi?
Ukungasho ukuthi i- Ikhasi lentengo kubhekiswe kulo kuma-FAQ we-plugin yethu. Okwamanje, ngishicilele i- ikhasi lamanani kwimenyu yethu ukuze kungabikho ukudideka noma ngubani, kepha noma kunjalo ucele ukuthi isibuyekezo sisuswe. Impendulo:
Ngakho-ke, ngamanye amazwi, umuntu ovumayo akakaze ayisebenzise insiza yethu kuvunyelwe ukukala insizakalo yethu ngokubuyekezwa kwenkanyezi engu-1. Njengoba sisebenzela ukusiza umphakathi ovulekile futhi sinikeze isisombululo esingabizi kakhulu, anginasiqiniseko sokuthi lokhu kusiza kanjani noma ngubani. Lokhu ngokuyisisekelo ukubuyekeza okungamanga - umbhali uyavuma ngokuphelele ukuthi akazange asayine noma asebenzise insizakalo yethu.
Ngingazizwa ngendlela ehlukile uma obukeza ebhalisile futhi asilinganise ngamakhono we-plugin - aze angeza nokuthi ufisa ukuthi amanani abekhona esizeni bekungaba kuhle. Kepha ukubuyekezwa kwenkanyezi engu-1 ngento angakaze ayisebenzise akunazaba.
BUYEKEZA 11/2: Manje sengikhona uthukuthele, a ikhanda elishisayo, engenangqondo, a jerk, i-insane, Futhi okungenangqondo ngoba ngiphatheke kabi ukuthi umuntu ongakaze asebenzise i-plugin unikeze isibuyekezo senkanyezi engu-1, waphunyuka ngokuthi insizakalo yethu ibingathembeki, nokuthi noma ngubani obhalisile uyisiphukuphuku. Isevisi abakaze bayibhalisele.
I-imeyili yami ibingezansi, impendulo yabo iphezulu.
Mhlawumbe sekuyisikhathi sokuthi ngenze nje lokho abanye onjiniyela be-plugin abakwenzayo lokho Matt futhi iqembu leWordPress alithokozi, futhi lidlula ngokunikela nganoma yisiphi isikhathi nomzamo emuva ku-WordPress bese uqala nje ukuthengisa ama-plugins esizeni sami. Kuyacaca ukuthi abanandaba nabantu abasekela ipulatifomu yabo.
BUYEKEZA 11/3: Namuhla, iqembu lamavolontiya kuWordPress linqume ukuthi ngidinga imfundo kwezokumaketha futhi langeluleka ukuba ngibe yindoda engcono. I-imeyili yami ibingezansi, impendulo yabo iphezulu.
Tags: uMike Epsteinizilinganiso ze-pluginpressplugins wordpressizilinganiso ze-wordpress
Nov 3, 2015 ngo-9: 58 AM
Ngivumelana nawe futhi uhlelo lokubuyekeza luya njengomeluleki wohambo. Ayikho inqubomgomo yokuqinisekiswa kwekhwalithi mayelana nohlelo lokubuyekeza kepha ukubuyekezwa kusetshenziswa njengendawo yokuthengisa ngisho nemikhiqizo / izinsizakalo ezingasebenzi njengoba zisho noma eziphula inqubomgomo yokulayisensa. Lokhu akulungile futhi akulona uchwepheshe. Kukhona nezinhlelo eziningi zangaphandle zokubuyekeza / zokulinganisa kepha unganqabela izilinganiso eziphansi.
Angikholelwa kuzilinganiso / izibuyekezo ngoba azilawulwa umuntu wesithathu ongazimele futhi azinazo izitifiketi zohlelo (njenge-iso noma okufanayo).
Angikholwa kakhulu ezimakethe ezinjenge-envato noma ezifanayo. Esikhathini esedlule bengithumela ezinye izingoma (nami ngingumculi) futhi azikaze zamukelwe. Manje ngibhalela umculo ezinkampanini ezithile zama-movie.
Nov 3, 2015 ngo-11: 56 AM
Kukhona ezinye izinhlelo empeleni ezenza umsebenzi omuhle wokulamula. Uhlu luka-Angie, ngokwesibonelo, lunikeza usonkontileka ithuba lokwenza izinto zilunge futhi uma kuvunyelwene ngokuvumelana njengokwanelisa, ukubuyekezwa okubi kungashintshwa. Kuyadabukisa ukuthi lokhu kubuyekezwa kumile - akunikezi lutho emphakathini futhi kungalimaza ukwamukelwa kwe-plugin yethu kuphela.
Nov 4, 2015 ngo-10: 06 PM
Yiza ohlangothini olumnyama futhi wamukele amandla we-CMS yezentengiso, iDoug! 🙂
Nov 5, 2015 ngo-3: 14 PM
Abantu abacasulayo abekho nje emphakathini womthombo ovulekile.